यसरी हुँदैछ पारस शाहको 'विमानस्थल काण्ड'को छानबिन - Everest Dainik - News from Nepal
यसरी हुँदैछ पारस शाहको ‘विमानस्थल काण्ड’को छानबिन
काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्ष बाहिरबाट भित्र जाँदै गरेको देखिएका भूतपूर्व युवराज पारस शाहले त्यहाँ खटिएका एक प्रहरी अधिकृतलाई धकेलेको जस्तो देखिने भिडिओको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा अझै सेलाइसकेको छैन।
कोमल त्यतिबेला स्वास्थ्य परीक्षणका उपचारका लागि थाई एअरवेजको उडानबाट थाईल्यान्डको राजधानी ब्याङ्कक जान लागेकी थिइन्।
विमानस्थलमा खैलाबैला किन भयो?
“उहाँ पछिपछि र छोरा अघिअघि भीभीआईपी (अतिविशिष्ट कक्ष) मा जाने बेलामा प्रहरीले पास खोज्नुभएछ। त्यतिबेला धकेलिएको रहेछ भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक बुझाइ छ,” त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षार्थ खटिएको नेपाल प्रहरी टोलीका प्रमुख डीआईजी सूर्य उपाध्यायले बीबीसीसँग भने।
याे पनि पढ्नुस चिटिक्क पारियो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (तस्बिरसहित)
“प्रहरी नै पीडित भएको देखिन्छ। तर यस्ता घटना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बारम्बार भइरहन्छन्। कहिले म भीआईपी हुँ भन्दै विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू आउँछन्। हामीले पास भए नभएको जाँच गर्नुपर्छ। यसलाई ठूलो बनाउन आवश्यक छैन।”
उनले भने, “त्यहाँ खटिएका प्रहरीले पनि यसलाई ठूलो मानेका छैनन्। सामान्य घटना हो।”
अतिविशिष्ट कक्ष के हो?
याे पनि पढ्नुस कसरी दुर्घटना भयो पूर्वयुवराज पारस शाहको गाडी ?
“तर नेपालका पूर्वराजालाई पनि त्यो सुविधा दिने गरिएको रहेछ,” उपाध्यायले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवनको दक्षिणतिरको पहिलो तल्लामा भीभीआईपी कक्ष रहेको छ।
“आइतवारको घटना त्यो कक्षदेखि मुनितिर भएको रहेछ, जहाँ पूर्वयुवराजका पछिपछि उनका अरू सहयोगी र समर्थकको पनि भिडभाड रहेछ,” उपाध्यायले भने।
छानबिन कसरी हुँदैछ?
डीआईजी उपाध्यायका अनुसार आइतवारको घटनाको छानबिन गरिरहेको छ।
छानबिन गर्न त्रिभुवन विमानस्थलमै कार्यरत एक एसपीको संयोजकत्वमा एक समिति बनाइएको छ।
याे पनि पढ्नुस त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोकिएकामा खेलाडीले गरे विरोध
छानबिनको प्रतिवेदन कहिले आउँछ?
उनले भने, “यो धेरै ठूलो घटना त होइन। यसबारे अनावश्यक चर्चा भइरहेको छ। हाम्रो प्रहरी नै पीडित भएको देखिन्छ। तर हाम्रो आन्तरिक छानबिन चलिरहेको छ। त्यसको निष्कर्ष चाँडै आउँछ।”
पूर्वयुवराज पारसले प्रहरीलाई हातपात गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनलाई केहीले कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
केहीले भने प्रहरीले नै दुर्व्यवहार गरेकाले उनले आक्रामक रूपमा प्रतिक्रिया दिएको टिप्पणी गरेका छन्।
पारस शाहको नाममा खोलिएको एउटा फेसबुक पेजमा विमानस्थलको घटनामा पूर्वयुवराजले माफी माग्दै सन्देश लेखेको देखिन्छ। तर सो खाताको आधिकारिकता भने पुष्टि हुनसकेको छैन । बिबिसी
ट्याग्स: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पारस शाह